काठमाडौं अपडेट : मतगणना जारी ८१ हजार ७६५ मतगणना हुँदा कसकाे कति मत ? - jagritikhabar.com
काठमाडौं अपडेट : मतगणना जारी ८१ हजार ७६५ मतगणना हुँदा कसकाे कति मत ?
काठमाडौं महानगरपालिकामा मतगणना जारी रहेको छ । निर्वाचन अधिकृतकाे कार्यालयले सार्वजनिक गरेकाे पछिल्लो परिणामअनुसार मेयरका उम्मेदवार बालेन साहले ३० हजार मत कटाएका छन् ।
८१ हजार ७६५ मतगणना हुँदा साहले ३०८५८ मत पाएका छन् । यस्तै एमालेका केशव स्थापितले १६३३७ र सिर्जना सिंहले १५९६० मत पाएका छन् । अहिले वडा नम्बर १ देखि छ र २८, २९? ३० र ३२ को गणना सकिएको छ । अहिले वडा नम्बर ७, ८, ९, १०, २५, २६, २७ र ३१ को गणना जारी रहेको छ ।
उता, कैलाली लम्की चुहा नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसकी शुशिला शाही विजयी भएकी छन् । उनी १२ हजार ७१३ मत ल्याएर प्रमुखमा निर्वाचित भएकी हुन् । उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी एमालेका महादेव बजगाईले १० हजार ४३५ मत ल्याएका छन् ।
यस्तै, उपप्रमुखमा एमालेकी जुना चौधरी विजयी भएकी छन् । उनले ११ हजार ७८ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएकी हुन् । उनकी प्रतिस्पर्धी जानकी कुमारी शाहीले ८ हजार ३०८ मत ल्याएकी छन् ।
यता, काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्र र उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस निर्वाचित भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका कान्छा लामा जिम्वा चारहजार ८९१ मतसहित निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले)का पूर्णबहादुर वाइबाले ३४ हजार १९५ मत पाए ।
त्यसैगरी, उपाध्यक्षमा कांग्रेसका सागर मोक्तान ४ हजार १६९ मतसहित निर्वाचित भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी शान्ति तितुङ राना मगरले १ हजार ५३० मत पाइन् ।
यसैगरी, सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पद नेपाली कांग्रेसले जितेको छ । अध्यक्षमा चतुरानन्द ठाकुर र उपाध्यक्षमा अमरकला यादव विजयी भएका हुन् ।
अध्यक्षमा जित हातपारेका ठाकुरले ३ हजार ८४५ मत पाएका छन् भने नेकपा एमालेका देव नारायण साहले ३ हजार ५८५ मत पाए । तेस्रो स्थानमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का केदारनाथ यादवले २ हजार ९५८ मत प्राप्त गरे ।
उपाध्यक्षमा निर्वाचित कांग्रेसकी यादवले ३ हजार ८४८ मत पाउँदा जसपाकी रञ्जुकुमारी यादवले ३ हजार २३२ मत प्राप्त गरिन् । एमालेकी गिता देवी चौधरीले ३ हजार मत प्राप्त गरिन् ।